China Tree rootball waya nkata Onye na-emepụta na Supplier |Ọwụwa Anyanwụ Yilong
A na-eji nkata waya rootball na-eme ihe n'ọtụtụ ebe iji kpuchido osisi na mgbọrọgwụ osisi ndị ọzọ, ha nwere ike idobe ala nke ọma mgbe ị na-ebugharị site na gwongworo ma ọ bụ transplanting. Kechie mgbọrọgwụ nwere ike inye nri zuru oke maka osisi, ọ bụ nhọrọ dị mma maka ịkọ ugbo na ịkọ ugbo. A na-eji ahịrị waya dụkọta nkata waya wee jikọta ọnụ, wee fesa mmanụ na-egbochi nchara.Anyị na-eji mmanụ ọkwa nri, o doro anya na enweghị isi na gburugburu ebe obibi pụrụ iche.Anyị na-enyekarị nha na dayameta 30cm - 140 cm, nha ndị ọzọ nwere ike imepụta dị ka mkpa gị.A na-eji nkata waya nke Holland mee ihe maka Holmac na Pazzaglia root balling machines.France Design/style rootball osisi nkata waya bụ maka French Market & The Belgium market.
Ihe: waya annealed ojii
Dayameta nke nkata: ọ na-adịkarị site na 30cm ruo 200cm
A na-efesa nchara mgbọrọgwụ osisi anyị na mmanụ ọkwa nri iji zere nchara tupu ejiri ya, ọ bụ gburugburu ebe obibi, ihe na-emebi emebi na enweghị mmerụ ahụ.
Anyị bụ ndị ọkachamara maka mmepụta nke osisi mgbọrọgwụ waya ntupu.
A na-akpọkwa ntupu mgbọrọgwụ osisi nkata bọọlụ mgbọrọgwụ osisi, ntupu osisi mgbọrọgwụ transplantation, nke a na-ejikarị kechie mgbọrọgwụ osisi mgbe a na-atụgharị osisi ahụ.
A na-ejikarị ụgbụ mgbọrọgwụ osisi eme ihe n'ugbo ọhịa na ụlọ ọrụ na-elekọta osisi ndị ọkachamara.Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-elekọta osisi ewepụtala ọrụ nke osisi na ịkpụgharị osisi na mgbọrọgwụ juru nkata.Ngwunye waya nwere ike idobe mgbọrọgwụ ya na ala, na-ekwe ka osisi ahụ nwee ike ịmepụta mgbọrọgwụ siri ike ma dị mma.
Ọ dị mkpa karịa ihe ọkụkụ dị mma, na-enweghị ezigbo ihe ọkụkụ ọ ga-esi ike ịnye osisi ndị dị mma, usoro ntụgharị na nchekwa mgbọrọgwụ dịkwa mkpa maka osisi ndị dị mma.
A na-ejikwa ụgbụ mgbọrọgwụ osisi eme ihe n'ubi na ebe ndị ọzọ n'ụwa nile.
Na usoro ntụgharị osisi, a na-ebu ụzọ kechie bọọlụ ala mgbọrọgwụ na iberibe jute wee tinye ya na ụgbụ mgbọrọgwụ osisi waya.Kpochie ụgbụ mgbọrọgwụ iji mee ka bọọlụ ala nke mgbọrọgwụ sie ike.Ọ dịkwa mfe ibufe ma chebe jute n'èzí ka ọ ghara ịdapụ.
Mgbọrọgwụ ụgbụ na-echebe rhizomes nke seedlings ma na-egbochi ala ala n'oge usoro transplanting seedling, nke na-eme ka ọnụọgụ ndụ nke osisi dịkwuo mma.
Anyị nwekwara ike ime dị ka ndị ahịa arịrịọ.
Nha nkata bọọlụ mgbọrọgwụ waya waya
Anyị nwekwara ike imepụta nha ndị ọzọ dịka ihe ị chọrọ.
Nke gara aga: Akpa compost
Osote: Gburugburu post nkwalite otu ubi ọnụ ụzọ ámá
nkata waya rootball
Netwọk waya hexagonal ojii
3d welded Panel nsu, Ihe ndozi Ugboro abụọ Waya Panel Mkpuchi ntụ ntụ, Ọnụ ụzọ ámá efere e ji achọ mma, Austrịa Y Post, Ọnụ ụzọ ámá ọkọlọtọ, Bracket,